स्वास्थ्य/जिबनशैली Archives - Daily Lokmandu
Posted in स्वास्थ्य/जिबनशैली
धनियाँ हाम्रो भान्सामा हुने एक चीज हो, जसले खानाको स्वाद र बासना बढाउने काम गर्छ । यसलाई हामी तरकारी, अचार र चटपटेलगायत चीजहरूमा प्रयोग गर्दछौँ । यो स्वादका लागि नभएर स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक छ । यसको दानादेखि पत्तासम्म विभिन्न रोगको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थात् यसमा औषधीय गुण हुन्छ । टाउको दुख्ने समस्या छ भने धनियाँको पेस्ट टाउकोमा राख्नुहोस् यसले फाइदा गराउँछ । यसैगरी उसले पाचनसम्बन्धि समस्या भएकाहरूका लागि पनि फाइदा गर्दछ । पाचनप्रणालीसम्बन्धि तपाईँलाई कुनै समस्या छ भने धनियाँको पाउण्डर सेवन गर्नुहोस् । यसका अन्य फाइदाहरू यस्ता छन् १. आँखासम्बन्धी सबै किसिमका समस्या भएकाहरूका लागि हरियो धनियाँ खानु लाभदायक हुन्छ । हरियो धनियाले शारीरिक कमजोरी हटाउन मद्दत गर्छ । हरियो धनियालाई भोजनमा सामेल गराउँदा पेटसम्बन्धी समस्या कम हुँदै जान्छन् । २. पेटमा रहेका
ठूलो टाउको,ढाडमा पानीले भरिएको पोका,एउटा ऑखा भएका बच्चा जन्मिन्छन यदी गर्वअवस्थामा यस्तो लापरवाही गर्नुभयो भने
बच्चा जन्मदा टाउको निकै ठूलो हुने, कसैको टाउको नहुने, ढाडमा पानीले भरिएका पोका हुने, ढाड नहुने, एउटा आँखा हुने, छाला चाउरी पर्ने, कसैको पुच्छरजस्तो थप अंग निस्कने जस्ता समस्या देखिने गर्छन्। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता समस्या सहित जन्मिएका बच्चा भेटिने गरेका छन्।नेपालमा जन्तजात यस्ता समस्या लिएर जन्मने बच्चा कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक त छैन । तर, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्ने दौरानमा महिनामा दुईदेखि तीन वटा यस्ता बच्चा जन्मिने गरेको फेला पारेको छु । धेरैजसो त यस्ता समस्या भएका बच्चा मृत नै जन्मिने गरेका छन् । तर, जो जिवित छन् उनीहरुमा पनि धेरै समस्या छ । यो समस्यालाई ‘न्युरल ट्युब डिफेक्ट’ भनिन्छ । यो आमाको गर्भ रहेको समयमा भ्रुणको विकास क्रममा स्नायु प्रणाली बन्ने प्रक्रियामा आउने अवरोधले निम्त्याउने समस्या हो । भ्रुणमा शरीरको स्नायु प्रणाली बन्ने क्रममा
धेरैजसो मान्छेलाई जतिखेर पनि कुनै न कुनै समस्या वा पीडाले सताइरहेको हुन्छ । कहिले टाउको दुख्छ, कहिले तनाव हुन्छ । यस्तोमा मान्छेले महंगा औषधि किनेर खान्छन् तर खासै फाइदा भने भइरहेको हुँदैन । तर शरीरका केही विन्दुमा केही सेकेन्ड थिच्दा स्वास्थ्यका अनेकथरी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ ? यहाँ हामी हातका केही यस्ता विन्दुहरूका बारेमा बताउँदैछौं जसलाई केहीबेर थिच्दा तपाईं कुनै पनि पीडाबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ । तनाव- तपाईं प्रायः तनावमा हुनुहुन्छ भने औषधिको सहारा नलिनुसे । हातको कान्छी औंलामुनिको नाडीमा हलुका दबाब दिनुस् । केही समय यसरी दबाब दिँदा तनाव हट्छ । अपच र चिन्ता- हत्केलाभन्दा लगभग तीन सेन्टीमिटर तलको भागलाई दबाउँदा अपच र चिन्ता जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हट्छन् । बाडुली- अचानक बाडुली लाग्यो र रोकिएन भने हत्केलाको बीच भागमा थिच्नुस् । बिस्तारै बाडुली हट्छ ।
पायल्स भएमा : के खाने, के नखाने ??पुरा पढी शेयर गर्नुहोला !!
पायल्स हुनुको प्रमुख कारणमा कब्जियत, अर्जीण, अत्याधिक मदिरापान, नशा लाग्ने चिज खानु, पिरो तारेको, मसालेदार खाना खानु, बसिरहने काम गर्नु, श्रम या व्यायाम नगर्नु, धुम्रपान, राती धेरै बेर जागा बस्नु, कलेजोको खराबी आदि हुन् ।यो रोगको लक्षणमा ट्वाइलेटमा धेरै बेर बस्दा पनि दिसा थोरै मात्र हुनु, गुद्द्धारमा काँडा बिझेजस्तो दुखाई, फुल्नु, चिलाउनु, रगत आउनु, धेरै रगत गएर शरीर पहेंलो देखिनु, कमजोरी, रिंगटा घबराहट हुनु, चिन्ता, रिस, अपान वायु अर्थात पाद रोक्नु, बल गरेर पाद्नु, आँखामा शोथ, खानामा अरुचि आदि हुन्छ । के खाने – गहुँको चोक्कर सहित बनेको रोटी– जौ, पुरानो चामल, रहर, मूंगुको दाल– फलमा बेल, अनार, काँचो नरिवल, केरा, अमला– तरकारीमा घिरौला, परवल, टमाटर, गाँजर, पालुंगो– खानासँग मूला खाने– नियमित रुपमा मेवा खाने– करेलाको रस– दहीको लस्सी खाने– धनिँयाको रसमा मिस्री मिलाएर खाने– पानी धेरै पिउने
सर्पले टोकेमा तत्काल के गर्ने ? कसरी घरमै अपनाउन सकिन्छ प्राथमिक उपचार, समयमै उपाचार नभए ज्यानै जान सक्छ काठमाडौँ – सर्प भन्ने बत्तिकै हामि झसँग हुन्छौ ।हामि झसँग हुनु पनि स्वभाबिक नै हो । किनकी यदि हामिलाइ सर्पले टोकेमा हाम्रो ज्यानै जान सक्छ । सर्प यति विषालु हुन्छकी यसको समयमै उपचार हुन नसके ज्यानै जान जान्छ। हामिले वर्षातको समयमा सर्पले टोकेर ज्यानै गएको समाचारहरू धेरै सुन्र्दै आइरहेका छौ । रातको समयमा सर्प बढी देखा पर्दछन । यसको उपचार छिटो नहुदा कयौ मानिसले ज्यान गुमाएका पनि छन ।यस्तो अवस्थामा सर्पले डसेको एक मिनेटभित्रै शरीरमा भएका टाइट गहना र कपडा फुकाल्नुपर्छ । टोकेको टाउमा टाइट पट्टी बाँध्नुहुँदैन । जुन ठाउँमा सर्पले डसेको छ उक्त भागलाई मुटुको लेभलभन्दा तल राख्नुपर्छ । सर्पले टोकेपछि प्राय मानिसहरुले चुसेर विष निकाल्ने गर्दछन तर हामिले त्यस्तो चुसेर विष निकाल्ने प्रयास गर्नु
Apr112019 by read colorNo Comments
धेरै चिया पिउँदा क्यान्सर हुन सक्छ है… जानकारी सबैलाई शेयर गराै
तपाईलाई लाग्न सक्छ बिहान एक कप दूध हालेको बाक्लो चिया पिउँदा शरिरमा उर्जा मिल्छ, स्फूर्ति आउछ । तर, चिया कसरी र कुन समयमा कति मात्रामा पिउने वा कुन चिया पिउनेबारे हेक्का नराख्दा यसले स्वास्थ्यमा फाइदा भन्दा बेफाइदा बढि गर्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? चिया धेरै पिउँदा क्यान्सर नै पो लाग्न सक्छ, ख्याल गर्नु हैं । र याे पनि २०७६ सालमा यी ६ राशिलाई पर्दै छ महाँसंयोग सहितको भाग्यफल, कुन राशिलाई कस्तो फाईदा देखि असर २०७६ सालको पहिलो दिन नै सूर्यको राशी परिवर्तन परेको छ। नयाँ वर्षको दिन बिहान ७ बजेर ५५ मिनेटबाट सूर्य आफ्नो उच्च राशी मेषमा हुनेछन्। सूर्यले मिन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्दा महासंयोग बन्ने गर्छ। मेष राशि सूर्यको उच्च राशि रहेको छ। जस कारण राशि चक्रमा ठूलो असर पर्न जाने हुन्छ। ज्योतिषहरुका अनुसार सूर्यले लामो समय पश्चात आइतवारका दिन राशी परिवर्तन गर्न गईरहेको छ। आइतब
एलोभेराका १० अदभूत फाइदा
घ्युकुमारी स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा एलोभेरा भनिन्छ र यसमा भिटामीन ए, बी, बी १२का साथै फोलिक एसिड, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम र पोटासियम जस्ता तत्वहरु पाइन्छन्। यसका केही फाइदाहरु यस्ता छन्ः १. यसको जुसले शरीरको अनावश्यक तौल घटाउन मद्दत गर्छ। २.मुटुका रोगहरुको सम्भावना न्यूनिकरण गर्न एलोभेरा जुस निकै लाभदायी मानिन्छ। ३.रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्छ। ४.दैनिक बिहान एक चम्चा एलोभेरा जेल खानाले पिसाब पोल्ने र संक्रमण हुने सम्भावना कम गर्छ। ५.राती सुत्नेबेला हरेक दिन एलोभेरा जुस खानाले पेट सफा हुन्छ र कब्जियतको समस्या हुँदैन। ६.पोलेको ठाउँमा एक चम्चा एलोभेरा जेलमा एक चम्चा मह मिसाएर लगाउनाले राहत मिल्नुका साथै दाग पनि हट्दै जान्छ। ७.हप्ताको एकपटक कपालमा एलोभेरा जुस लगाउनाले कपाल बाक्लो र मुलायम हुँदै जान्छ। ८.एलोभेरा जेललाई बेसारसँग
के हो ‘होलबडी’ चेकअप ? यसमा के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस र अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस नेपाली समाजमा बिरामी नभई स्वास्थ्य जाच नगर्ने प्रचलन छ तर हिजोआज जनमानसमा स्वास्थ्यप्रतिको सजगता बढ्दै गएको छ। समय-समयमा आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने चलन सुरु भएको छ। आमनागरिकको यही सचेतना बुझेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूतिर आकर्षित गर्न स्वास्थ्य परीक्षणका विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गर्छन्। तिनै मध्येको चर्चित प्याकेज हो, ‘होलबडी चेकअप’ अर्थात शारीरिक परीक्षण। होलबडी चेकअपबारे धेरैले सुनेका त हुन्छन्, तर, त्यसभित्र के-के जाँच गरिन्छ, के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेबारे चाहिँ उति धेरै जानकारी राखेको पाइँदैन। के हो ‘होल बडी चेकअप’ ? ‘होलबडी चेकअप’ गर्दा सामान्यतया मानिसमा चाँडो संभावित ठूला रोगहरुबारे पूर्व जानकारी हुने गर्दछ। होलबडीमा मानिसको मुटु, कलेजो, फोक्सो
एजेन्सी, यो अति जरुरी जानकारी सबैमा सेयर गरौँ । हृदयघात युवा वयष्क या वृद्धवृद्धा जुनसुकै उमेरमा पनि अकस्मात हुन सक्छ, यो घातक शव्दको नाम सुन्दा पनि धेरैलाई डर लाग्छ । आज सबै ठिक ठाक रहेको मानिस भोली मृत्युको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ, यो जतिखेर पनि जहाँ पनि आउन सक्छ । हृदयघातका कारण हरेक वर्ष धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ । बूढाबूढीलाई मात्र हृदयघात लाग्छ भन्ने होइन । यौवनावस्थामा रहेका व्यक्ति पनि यसको शिकार हुन्छन् । हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनापहिले नै यसको लक्षण देखिन शुरु गर्छ । यसमा ध्यान दिँदा यसको खतराबाट बच्न सकिन्छ । ▶️अन्य भागमा पीडा ▶️– छाती वा शरीरका अन्य भागमा पीडा भयो भने हृदयघातको संकेत हो ।छाती बाँउडियो भने त पक्का हृदयघातको लक्षण हो ।सास ▶️लिन अप्ठ्यारो ▶️– सास लिन गाह्रो भयो भने पनि हृदयघातको लक्षण हो । यस्तो समस्या महिलाहरूमा ▶️बढी देखिन्छ ।पाचनतन्त्रमा गडबडी ▶️– पाचनतन्त्
मृगौला खराब भएर बर्षेनी सैयौंले ज्यान गुमाउँछन् । मृगौला शरीरको यस्तो अंग हो, जसको अनुपस्थितीमा शरीरको कार्यसंचालन हुन सक्दैन । परिणामतः मृगौला रोग लागेपछि धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ । मृगौला शरीरको यस्तो फिल्टर हो, जसले रगतमा रहेको दुषित तत्व सफा गर्छ । मृगौला स्वस्थ्य राख्न सकियो भने नै शरीर निरोगी हुने हो । मृगौला कसरी स्वस्थ्य राख्ने त ? यसका केहि काइदा छन् । जस्तो कि, सक्रिय जीवनशैली, स्वस्थ्य खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानीको सेवन आदिले मृगौलालाई स्वस्थ्य राख्न सकिन्छ । त्यसबाहेक अर्को घरेलु विधी पनि छ, जसले प्रभावकारी रुपमा मृगौला सफा राख्ने काम गर्छ । मृगौला सफा गर्नका लागि धनिया राम्रो विकल्प हो । यो सजिलै र जहाँ पनि पाइन्छ । त्यो पनि सस्तो मूल्यमा । एक मुठ्ठी धनिया लिनुहोस् । त्यसलाई स-सना टुक्रा गर्नुहोस् । एक भाँडामा ९ लिटर पानी हालेर उक्त टुक्रा मिसाउनुहोस्